Soosaarida Purslane (Soosaarida Portulaca Oleracea), Soosaarayaasha Purslane (Portulaca Oleracea Extract) Soosaarayaasha, Soosaarayaasha Purslane (Portulaca Oleracea Extract) Soosaarayaasha, Purslane Extract (Portulaca Oleracea Extract) Dhoofiyeyaasha
Soosaarida Purslane (Soosaarida Portulaca Oleracea)
[Magaca Latin] Portulaca oleracea L.
[Muuqaalka] Budada Fine Budada ah
4 (1), 10: 1
[Waxyaabaha firfircoon] Purslane flavone
1) Sumeeyn, qaboojin iyo joojinta dhiig baxa dhiiga.
2) Cudurka kaadi mareenka, metrorrhagia iyo metrostaxis.
3) Baabasiir, shuban, cambaar, qaniinyo mas iyo dixirigoodu.
4) Cudurka daran ee loo yaqaan 'Arthritis arthritis', 'enteritis', 'cystitis', kaadi mareenka kaadi mareenka, dabada oo barata, babaasiirta.
1.Kaabashada cuntada caafimaadka leh
Ku saabsan Soosaarida Purslane (Portulaca Oleracea Extract)
Soosaarida Portulaca Oleracea waxaa loo isticmaalay dawo dadweyne wadamo badan, iyadoo u shaqeysa sida febrifuge, antiseptic, vermifuge, iyo wixii la mid ah. Waxay soo bandhigaysaa noocyo kala duwan oo saameyn daawooyin ah, oo ay ku jiraan bakteeriyada, antiulcerogenic, anti-bararka, antioxidant, iyo guryaha bogsiinta nabarrada.